Bit By Bit - Running fanandramana - koa fanehoan-kevitra
Fanontaniana momba ny anton'ny amin'ny fikarohana ara-tsosialy dia matetika sarotra sy be pitsiny. Fa ny fototry ny anton'ny fomba mifototra amin'ny causal kisary, jereo ny Pearl (2009) , sy ny fomba fototra miorina amin'ny mety ho vokatra, dia jereo Imbens and Rubin (2015) (sy ny ara-teknika fanazavana fanampiny ao amin'ity toko ity). Fa ny fampitahana ireo fomba fijery roa ireo, jereo ny Morgan and Winship (2014) . Fa ofisialy fomba famaritana ny confounder, jereo ny VanderWeele and Shpitser (2013) .
Ao amin'ny toko, dia namorona ny zavatra toa toy ny tsipika mazava eo ny fahafahantsika manao causal vinavina avy amin'ny fanandramana sy ny tsy fanandramana tahirin-kevitra. Raha ny marina, mino aho fa ny fahasamihafana dia blurrier. Ohatra, ny olona rehetra manaiky fa ny fifohana sigara no mahatonga homamiadana na dia tsy mbola nanao fanandramana ny randomized mifehy izay manery ny olona hifoka sigara. Fa tsara boky halavan'ny causal fitsaboana amin'ny fanaovana ny vinavinan'ny avy amin'ny angon-drakitra fanandramana tsy mahita Rosenbaum (2002) , Rosenbaum (2009) , Shadish, Cook, and Campbell (2001) , ary Dunning (2012) .
Toko 1 sy 2 ny Freedman, Pisani, and Purves (2007) manolotra mazava fampidirana an-fahasamihafana eo amin'ny fanandramana, fanandramana, ka randomized fanandramana.
Manzi (2012) dia manome mahavariana sy vakiana fampidirana ho ao an-filozofika sy ny antontanisa underpinnings ny randomized fanandramana. Izany koa dia manome ny tena mahaliana-tontolo ohatra ny herin 'ny fanandramana eo amin'ny raharaham-barotra.
Casella (2008) , Box, Hunter, and Hunter (2005) , Athey and Imbens (2016b) manome tsara ny antontan'isa teny fampidirana ny lafiny famolavolana ny andrana sy fandalinana. Ankoatra izany, misy tsara fitsaboana ny fampiasana ny andrana maro samihafa saha: toe-karena (Bardsley et al. 2009) , sosiolojia (Willer and Walker 2007; Jackson and Cox 2013) , psikolojia (Aronson et al. 1989) , ara-politika siansa (Morton and Williams 2010) , sy ny ara-tsosialy ny politika (Glennerster and Takavarasha 2013) .
Ny maha zava-dehibe ny mpandray anjara fandraisana mpiasa (ohatra, santionany) dia matetika eo ambanin'ny-sarobidy amin'ny fikarohana andrana. Na izany aza, raha ny vokatry ny fitsaboana dia heterogeneous eo amin'ny mponina, dia santionany zava-dehibe. Longford (1999) mahatonga izany hevitra tsara rehefa hisolovava azy mpikaroka mieritreritra ny andrana toy ny mponina amin'ny hiankina amin'ny kisendrasendra izany fanadihadiana santionany.
Lafiny roa ny andrana: laboratoara-saha sy ny Analog-nomerika (Fizarana 4.3)
Ny Fisampan-droa izay nanolotra an-tsaha eo amin'ny laboratoara sy ny fanandramana dia somary notsorina. Raha ny marina, dia nanolo-kevitra mpikaroka hafa-tsipiriany kokoa typologies, indrindra ireo izay manasaraka ny an-tsaha isan-karazany andrana (Harrison and List 2004; Charness, Gneezy, and Kuhn 2013) . Ankoatra izany, dia misy roa karazana hafa ny andrana ny mpahay siansa ara-tsosialy tanterahana amin'ny alalan'ny izay tsy mifanaraka Kendreo ho any amin'ny laboratoara sy ny saha Fisampan-droa: fanadihadiana fanandramana sy ny ara-tsosialy fanandramana. Survey fanandramana dia fanandramana mampiasa ny foto-drafitr'asa ny fanadihadiana ary ampitahao-misy valiny ny hafa dikan 'ny fanontaniana ihany (ny sasany fanandramana fanadihadiana dia aseho ao amin'ny Toko faha-3); bebe kokoa amin'ny fanadihadiana fanandramana hahita Mutz (2011) . sosialy fanandramana no fanandramana izay ny fitsaboana dia misy politika ara-tsosialy izay afaka ihany no ho napetraky ny governemanta. Fanandramana ara-tsosialy dia Mifandray akaiky amin'ny Program tombana. Bebe kokoa amin'ny politika fanandramana, jereo ny Orr (1998) , Glennerster and Takavarasha (2013) , sy Heckman and Smith (1995) .
Maro ny taratasy efa nampitaha laboratoara sy ny saha fanandramana ao amin'ny saro-takarina (Falk and Heckman 2009; Cialdini 2009) sy eo amin'ny vokatra ny manokana andrana amin'ny siansa politika (Coppock and Green 2015) , ny toekarena (Levitt and List 2007a; Levitt and List 2007b; Camerer 2011; Al-Ubaydli and List 2013) sy ny psikolojia (Mitchell 2012) . Jerit, Barabas, and Clifford (2013) manome mahafinaritra fikarohana nanaovan'Andriamanitra ny mampitaha vokatra avy amin'ny laboratoara sy ny an-tsaha fanandramana.
Olana momba ny mpandray anjara ny fanovana ny fitondran-tena, satria fantany izy ireo rehefa nandinika akaiky ireo indraindray dia antsoina hoe tinady vokany, ary efa nianatra tany psikolojia (Orne 1962) sy ny toekarena (Zizzo 2009) . Na dia mifandray ny ankamaroany amin'ny laboratoara fanandramana, ireo olana koa dia mety hiteraka olana alohan'ny fanandramana koa. Raha ny marina, mitaky vokatry koa indraindray antsoina hoe Hawthorne vokany, ny teny izay notsoahina avy any an-tsaha fanandramana, indrindra ny fahazavana malaza fanandramana izay nanomboka tamin'ny 1924 tao amin'ny Hawthorne asan'ny Andrefana Herinaratra Company (Adair 1984; Levitt and List 2011) . Samy tinady vokatra sy Hawthorn vokany dia akaiky mifandray amin'ny hevitra ny reactive fandrefesana noresahina tao amin'ny Toko 2 (jereo koa Webb et al. (1966) ).
Ny tantaran'ny an-tsaha andrana efa voalaza ao amin'ny toe-karena (Levitt and List 2009) , ara-politika siansa (Green and Gerber 2003; Druckman et al. 2006; Druckman and Lupia 2012) , psikolojia (Shadish 2002) , ary ny vahoaka politika (Shadish and Cook 2009) . Faritra iray siansa ara-tsosialy an-tsaha izay lasa nalaza fanandramana haingana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Fa tsara famerenana ny asa ao anatin'ny toe-karena mahita Banerjee and Duflo (2009) , ary ny fanakianana tombana mahita Deaton (2010) . Fa ny famerenana ny ara-politika ity asa ity eo amin'ny siansa mahita Humphreys and Weinstein (2009) . Farany, ny etika fanamby tafiditra amin'ny saha fanandramana efa nisafo amin'ny siansa ara-politika (Humphreys 2015; Desposato 2016b) sy ny fampandrosoana ny toekarena (Baele 2013) .
Ao amin'ny toko, dia nanolo-kevitra fa mialoha fitsaboana vaovao azo ampiasaina mba hanatsarana ny fametrahana mazava tsara ny vokatry Tombanana fitsaboana, saingy misy ny sasany ny adihevitra momba izany fomba: Freedman (2008) , Lin (2013) , ary Berk et al. (2013) ; jereo Bloniarz et al. (2016) Raha mila fanazavana fanampiny.
Mandroso mihoatra tsotra fanandramana (Fizarana 4.4)
Aho nifidy ny mifantoka amin'ny foto-kevitra telo: manan-kery, heterogeneity ny fitsaboana vokany, ary ny rafitra. Tsy mitovy hevitra ireo anarana any an-tsaha isan-karazany. Ohatra, mazàna ny hifindra psikology mihoatra fanandramana tsotra amin'ny alalan'ny mifantoka amin'ny mpanelanelana sy ny moderatera (Baron and Kenny 1986) . Ny hevitra ny mpanelanelana dia azony izay dia miantso rafitra, ary ny hevitra ny moderatera no nalain'ny izay hoe ivelany kery (ohatra, dia ny vokatry ny andrana ho hafa raha nisy nihazakazaka samy hafa ny toe-javatra) sy heterogeneity ny fitsaboana vokatry ( ohatra, dia ny vokatry lehibe kokoa ho an'ny olona sasany noho ny olon-kafa).
Ny fanandramana ny Schultz et al. (2007) dia mampiseho ny fomba teoria ara-tsosialy dia azo ampiasaina hanao ny mari fitsaboana mahomby. Fa kokoa tohan-kevitra ankapobeny momba ny andraikitry ny teoria eo amin'ny fampianarana mahomby asa atao, jereo ny Walton (2014) .
Kery (Fizarana 4.4.1)
Ny foto-kevitra ny anatiny sy ivelany no voalohany manan-kery nampidirina tao Campbell (1957) . Jereo ny Shadish, Cook, and Campbell (2001) ho an'ny antsipirihany kokoa ny tantara sy ny tsara famolavolana ny antontanisa famaranana kery, anatiny manan-kery, fanorenana manan-kery, ary manan-kery ivelany.
Fa Indray Mitopy Maso An'i olana mifandraika amin'ny antontan'isa hevitra kery amin'ny fanandramana hahita Gerber and Green (2012) (ho an'ny siansa ara-tsosialy fomba fijery) sy Imbens and Rubin (2015) (ho an'ny antontan'isa fomba fijery). Misy olana ny antontan'isa famaranana kery mipoitra manokana any anaty aterineto an-tsaha fanandramana dia ahitana olana toy ny computationally fomba mahomby ho an'ny famoronana matoky miankina intervals amin'ny tahirin-kevitra (Bakshy and Eckles 2013) .
Anaty kery dia mety ho sarotra ny hahazoana antoka any an-tsaha fanandramana sarotra. Jereo, ohatra, Gerber and Green (2000) , Imai (2005) , sy Gerber and Green (2005) noho ny adihevitra momba ny fampiharana ny sarotra fanandramana momba ny fifidianana an-tsaha. Kohavi et al. (2012) sy Kohavi et al. (2013) manome ny fampidirana ho any amin'ny zava-tsarotra ny elanelam-potoana io kery any an-tserasera an-tsaha fanandramana.
Lehibe iray miahy amin'ny anatiny manan-kery no olana amin'ny randomization. Ny fomba iray mety mahita olana amin'ny randomization dia ny mampitaha ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vondrona amin'ny toetra azo dinihina. Io karazana fampitahana dia antsoina hoe ny mizana maso. Jereo ny Hansen and Bowers (2008) ho antontan'isa fomba mba hampifandanjana taratasim-bola, ka jereo Mutz and Pemantle (2015) ho an'ny taratasim-bola ahiahy momba ny mahay mandanjalanja. , Ohatra, mampiasa mizana mijery Allcott (2011) hita fa misy ny sasany ny randomization porofo fa tsy manatanteraka araka ny tokony ho telo ny andrana ao ny sasany amin'ireo OPower andrana (jereo ny Table 2, toerana 2, 6, ary 8). Fa fomba hafa, dia jereo Imbens and Rubin (2015) , Chapter 21.
Hafa lehibe olana mifandray amin'ny anatiny kery dia: 1) ny iray-niandany tsy fanarahan-dalàna, izay tsy ny rehetra tao amin'ny fitsaboana vondrona tena nahazo ny fitsaboana, 2) roa niandany tsy fanarahan-dalàna, izay tsy ny rehetra tao amin'ny fitsaboana vondrona dia mandray ny fitsaboana ary ny sasany ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny vondrona mandray ny fitsaboana, 3) fanenenana tsara antoniny, izay vokatra tsy refesina nandritra ny mpandray anjara, ary 4) fitsabahana, izay ny fitsaboana spills ny avy amin'ireo olona ao amin'ny fitsaboana toe-javatra ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny toe-javatra. Jereo ny Gerber and Green (2012) Toko 5, 6, 7, ary ny 8 bebe kokoa mikasika tsirairay ireny olana ireny.
Fa manan-kery bebe kokoa ny fanamboarana, jereo ny Westen and Rosenthal (2003) , ary bebe kokoa amin'ny fanamboarana kery amin'ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao, Lazer (2015) sy ny Toko 2 amin'ity boky ity.
Lafiny iray mampanan-kery ny ivelany dia ny toerana izay misy tsehatra ny fitiliana. Allcott (2015) dia manome mitandrina teorika sy empirical fitsaboana ny toerana fifantenana fitongilanana. Ity olana ity ihany koa ny hevitra ao Deaton (2010) . Ankoatra ny toerana replicated maro, ny Home Report Energy tsehatra ihany koa ny maro tsy miankina nianatra fikarohana vondrona (ohatra, Ayres, Raseman, and Shih (2013) ).
Heterogeneity ny fitsaboana vokatry (Fizarana 4.4.2)
Fa tsara topimaso ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry any an-tsaha fanandramana, jereo ny Toko 12 amin'ny Gerber and Green (2012) . Fa ny fampidirana ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry amin'ny fitsapana ara-pitsaboana, dia jereo Kent and Hayward (2007) , Longford (1999) , sy Kravitz, Duan, and Braslow (2004) . Heterogeneity ny fitsaboana amin'ny ankapobeny vokatry hifantoka amin'ny fahasamihafana mifototra amin'ny mialoha fitsaboana toetra. Raha toa ianao ka liana amin'ny heterogeneity miorina amin'ny lahatsoratra-fitsaboana vokatra, dia sarotra kokoa approachs no ilaina toy ny tena stratification (Frangakis and Rubin 2002) ; jereo Page et al. (2015) fa ny famerenana.
Maro ny mpikaroka Tombanan'ny ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry Linear mampiasa ny fihemoran'ny, fa fomba vaovao miantehitra amin'ny milina ny fianarana, ohatra Green and Kern (2012) , Imai and Ratkovic (2013) , Taddy et al. (2016) , sy Athey and Imbens (2016a) .
Misy ny sasany tsy finoana momba hitan'ny heterogeneity ny vokatry noho ny maro fampitahana olana sy "mpanjono." Misy isan-karazany ny antontan'isa fomba izay afaka manampy ny adiresy olana momba ny maro fampitahana (Fink, McConnell, and Vollmer 2014; List, Shaikh, and Xu 2016) . Iray fomba amin'ny olana momba ny "jono" dia mialoha ny fisoratana anarana, izay lasa hatrany iraisana amin'ny psikolojia (Nosek and Lakens 2014) , ara-politika ny siansa (Humphreys, Sierra, and Windt 2013; Monogan 2013; Anderson 2013; Gelman 2013; Laitin 2013) , ary ny toe-karena (Olken 2015) .
Ao amin'ny fianarana ny Costa and Kahn (2013) ihany no tokony ho antsasaky ny tokantrano ao amin'ny fanandramana dia afaka ho mifandray amin'ny ny isan'ny mponina vaovao. Mpamaky liana amin'ny antsipiriany sy ny mety ho olana amin'ny fanadihadiana ity dia tokony miresaka ny tany am-boalohany taratasy.
Rafitra (Fizarana 4.4.3)
Rafitra dia mampino zava-dehibe, fa ireo kosa dia mihodina ho zavatra tena sarotra ny hianatra. Fikarohana momba ny rafitra akaiky mifandray amin'ny fianarana ny mpanelanelana amin'ny psikolojia (fa jereo koa VanderWeele (2009) ho marina fampitahana eo amin'ny roa hevitra). Antontan'isa fomba ny fitadiavana rafitra, toy ny fomba mivoatra ao Baron and Kenny (1986) , no tena fahita. Indrisy anefa fa, raha ny fandehany fa ireo fomba miankina amin'ny sasany mahery vinavina tsotsotra (Bullock, Green, and Ha 2010) ka mijaly rehefa misy maro rafitra, toy ny mety manantena amin'ny toe-javatra maro (Imai and Yamamoto 2013; VanderWeele and Vansteelandt 2014) . Imai et al. (2011) sy Imai and Yamamoto (2013) manolotra fomba antontan'isa vitsivitsy nohatsaraina. Ankoatra izany, VanderWeele (2015) manolotra boky-lavany fitsaboana amin'ny zava-dehibe maromaro vokatra, anisan'izany ny fomba fahatsapana feno famakafakana.
Ny fomba mitokana dia mifantoka amin'ny fanandramana izay miezaka ny fitaovana ny rafitra mivantana (ohatra, manome vitaminina C tantsambo). Indrisy anefa, maro ny siansa ara-tsosialy matetika ny toe-javatra misy rafitra maro ary sarotra hanao ny mari fitsaboana izay miova ny iray tsy manova ny hafa. Misy fomba mba tamin'ny andrana nanova rafitra dia voafaritra ao amin'ny Imai, Tingley, and Yamamoto (2013) , Ludwig, Kling, and Mullainathan (2011) , sy Pirlott and MacKinnon (2016) .
Farany, rafitra manana ela ihany koa ny tantara ao amin'ny filozofia ny siansa araka ny voalaza ny Hedström and Ylikoski (2010) .
Mampiasa misy tontolo (Fizarana 4.5.1.1)
Bebe kokoa momba ny fampiasana ny taratasy fianarana sy ny fanaraha-maso fampianarana mba handrefesana fanavakavahana mahita Pager (2007) .
Manaova fanandramana anao manokana (Fizarana 4.5.1.2)
Ny fomba mahazatra indrindra handray mpandray anjara amin'ny fanandramana fa hanorina dia Amazon Mechanical Turk (MTurk). Satria MTurk Mpaka lafiny nentim-paharazana laboratoara andrana-fandoavana ny olona mba hamitana asa fa izy ireo dia tsy atao ho maimaim-poana-maro ny mpikaroka no efa nanomboka mampiasa Turkers (ny mpiasa ao amin'ny MTurk) toy ny mpandray anjara ao amin'ny olombelona foto-kevitra fanandramana niafara tamin'ny haingana sy mora fanangonana antontan'isa noho ny nentim-paharazana on-toeram-pianarana laboratoara fanandramana (Paolacci, Chandler, and Ipeirotis 2010; Horton, Rand, and Zeckhauser 2011; Mason and Suri 2012; Rand 2012; Berinsky, Huber, and Lenz 2012) .
Ny tanjaky ny andrana lehibe indrindra amin'ny mpandray anjara nanakarama avy MTurk dia ara-pitaovana: dia mamela ny mpikaroka handray mpandray anjara haingana sy raha ilaina. Lab fanandramana kosa dia afaka maka herinandro mba hihazakazaka sy an-tsaha fanandramana afaka maka volana mba nametraka-up, fanandramana tamin'ny mpandray anjara avy any MTurk nanakarama azo nihazakazaka andro. Ohatra, Berinsky, Huber, and Lenz (2012) dia afaka handray 400 foto-kevitra ao anatin'ny iray andro mba handray anjara amin'ny iray 8 minitra fanandramana. Ankoatra izany, ireo mpandray anjara dia azo nanakarama noho ny saika misy antony (anisan'izany ny fanadihadiana sy fiaraha-miasa faobe, araka ny noresahina tao amin'ny toko faha-3 sy faha-5). Ity aina amin'ny fandraisana mpiasa dia midika fa afaka mihazakazaka mpikaroka sequences ny mifandray andrana amin'ny haingana nifandimby.
Alohan'ny mpilatsaka mpandray anjara avy amin'ny MTurk noho ny ny fanandramana, dia misy zava-dehibe efatra ho fantatra. Voalohany, maro ny mpikaroka tsy manana fisalasalana manokana ny andrana momba Turkers. Satria fisalasalana izany dia tsy voafaritra tsara, dia sarotra ny hanohitra amin'ny porofo. Na izany aza, taorian'ny taona maro ny fampianarana Turkers, dia afaka milaza izao fa io fisalasalana dia tsy tena ilaina. Nisy fikarohana maro mampitaha ny Mponina ny Turkers hafa fampianarana ny mponina sy ny maro mampitaha vokatry ny andrana amin'ny Turkers ny vokatra avy amin'ny mponina hafa. Noho izany rehetra izany ny asa, heveriko fa ny fomba tsara indrindra ho anao ny mieritreritra momba izany dia ny hoe mahay mandanjalanja Turkers dia tsy hanahirana santionany, be toy ny mpianatra, fa kely kokoa ny hafa (Berinsky, Huber, and Lenz 2012) . Noho izany, toy ny mpianatra dia antonony mponina ho an'ny sasany, fa tsy izy rehetra andrana fikarohana, Turkers dia antonony mponina ho an'ny sasany, nefa tsy ny rehetra fikarohana. Raha handeha hiasa amin'ny Turkers, dia tsy misy dikany ny mamaky ny maro amin'ireo fianarana mampitaha sy hahatakatra ny tsipirian'ilay.
Faharoa, mpikaroka efa lasa fomba fanao tsara indrindra ho an'ny nitombo-anatiny manan-kery ny Turk andrana, ary tokony hianatra momba sy manaraka ireo fanao tsara indrindra- (Horton, Rand, and Zeckhauser 2011; Mason and Suri 2012) . , Ohatra, ny mpikaroka mampiasa Turkers Ampirisihina hampiasa ny sivana mba hanala raharahain'ny mpandray anjara (Berinsky, Margolis, and Sances 2014; Berinsky, Margolis, and Sances 2016) (fa jereo koa ny DJ Hauser and Schwarz (2015b) sy DJ Hauser and Schwarz (2015a) ). Raha tsy hanala raharahain'ny mpandray anjara, dia misy vokatry ny fitsaboana azo nosasana avy amin'ny tabataba nampidirina avy raharahain'ny mpandray anjara, ary amin'ny fampiharana ny isan'ny mpandray anjara raharahain'ny mety ho Mitana. Ao amin'ny fanandramana ny amin 'Huber sy ny mpiara-miasa (2012) tokony ho 30% ny mpandray anjara tsy tsara fototra ny sivana. Olana iray hafa mitovy amin'ny Turkers dia tsy bado mpandray anjara (Chandler et al. 2015) .
Fahatelo, mikasika ny sasany endrika nomerika hafa andrana, MTurk fanandramana tsy afaka mitsambikina mihoatra, Stewart et al. (2015) Tombanan'ny fa na oviana na nanome fotoana misy afa-tsy momba ny 7.000 ny olona ao amin'ny MTurk.
Farany, dia tokony fantatrareo fa MTurk dia fiaraha-monina sy ny fitsipika sy ny fenitra manokana (Mason and Suri 2012) . Toy izany koa fa raha miezaka ny hahalala ny kolontsaina amin'ny firenena iray izay efa handeha ho mihazakazaka ny fanandramana, dia tokony hiezaka bebe kokoa ny momba ny kolontsaina sy ny fitsipika ny Turkers (Salehi et al. 2015) . Ary, dia tokony ho fantatrareo fa ny Turkers dia hiresaka momba ny fanandramana raha manao zavatra tsy mendrika na unethical (Gray et al. 2016) .
MTurk dia mampino mety fomba handray mpandray anjara ny fanandramana, na izy ireo laboratoara-tahaka, toa an'i Huber, Hill, and Lenz (2012) , na mihoatra saha-tahaka, toa an'i Mason and Watts (2009) , Goldstein, McAfee, and Suri (2013) , Goldstein et al. (2014) , Horton and Zeckhauser (2016) , ary Mao et al. (2016) .
Aoreno ny ny vokatra (Fizarana 4.5.1.3)
Raha mieritreritra ny miezaka ny mamorona anao manokana vokatra dia manoro hevitra fa mamaky ny torohevitra natolotry ny vondrona MovieLens in Harper and Konstan (2015) . Ny manan-danja lalin-tsaina avy amin'ny zavatra niainany dia ny hoe isaky ny tetikasa mahomby dia maro dia maro ny tsy fahombiazana. Ohatra, ny vondrona MovieLens nandefa entana hafa toy ny GopherAnswers izay tsy fahombiazana tanteraka (Harper and Konstan 2015) . Ohatra iray hafa ny mpikaroka mahomby raha miezaka hanorina ny vokatra dia ny ezaka Edward Castronova ny hanao lalao an-tserasera antsoina hoe Arden. Na dia eo aza $ 250.000 ao amin'ny famatsiam-bola, ny tetikasa dia flop (Baker 2008) . Tetikasa toy ny GopherAnswers sy Arden dia indrisy fahita kokoa noho ny tetikasa toy ny MovieLens. Farany, rehefa nilaza fa tsy fantatro ny hafa mpikaroka izay efa nahavita nanorina vokatra ho an'ny miverimberina fanandramana eto no mari-pitsaràna: 1) mpandray anjara mampiasa ny vokatra noho ny zavatra izany dia manome azy ireo (ohatra, izy ireo fa tsy karama ary tsy mpiasa an-tsitrapo manampy siansa) ary 2) ny vokatra dia efa nampiasaina ho an'ny mihoatra ny iray miavaka andrana (izany hoe, tsy mitovy fanandramana imbetsaka amin'ny mpandray anjara hafa dobo). Raha fantatrao ny hafa ohatra, trarantitra ianao, aoka aho fantany.
Mpiara-miasa amin'ny mahery vaika (sampana 4.5.2)
Efa reko ny hevitra ny Pasteur ny Quadrant niresaka matetika amin'ny teknolojia orinasa, ary manampy mandamina ezaka fikarohana ao amin'ny Google (Spector, Norvig, and Petrov 2012) .
Bond sy ny mpiara-miasa aminy 'fianarana (2012) koa dia miezaka ny mamantatra ny vokatry ny fitsaboana ireo amin'ny namana' ireo izay nandray azy ireo. Noho ny nanaovana ny fanandramana, ireo spillovers dia sarotra ny mamantatra cleanly; liana mpamaky dia tokony hahita Bond et al. (2012) ho tsara kokoa ny fifanakalozan-kevitra. Ity fanandramana ity dia ampahany amin'ny lava fomban-drazana ny andrana amin'ny siansa ara-politika eo amin'ny ezaka mba hampaherezana ny fifidianana (Green and Gerber 2015) . Ireo hahazoam-avy-ny-bato fanandramana Fahita amin'ny ampahany satria ao Pasteur ny Quadrant. Izany hoe, maro ireo olona izay antony hampitombo fifidianana sy ny fifidianana mety ho mahaliana kokoa ny fitondran-tena mba hizaha toetra ankapobeny momba ny fitondran-tena fiovana teoria sy ny hery mitarika ara-tsosialy.
Mpikaroka hafa no nanome torohevitra momba ny mandeha an-tsaha fanandramana amin'ny fikambanana mpiara-miasa toy ny antoko politika, fikambanana tsy miankina, ary ny orinasa (Loewen, Rubenson, and Wantchekon 2010; List 2011; Gueron 2002) . Ny hafa indray nanatitra torohevitra momba ny fomba fiaraha-miasa amin'ny fikambanana dia afaka hisy fiantraikany fikarohana teti-dratsy (Green, Calfano, and Aronow 2014; King et al. 2007) . Partnership koa mitarika ny etika fanontaniana (Humphreys 2015; Nickerson and Hyde 2016) .
Design toro-hevitra (Fizarana 4.6)
Raha toa ianao ka handeha drafitra mamorona ny fanadihadiana alohan'ny nihazakazaka ny andrana, no milaza fa manomboka amin'ny alalan'ny famakiana ny tatitra torolalana. Ny vadin'ny (mivaingana Standard tatitra ny Fisedrana) torolalana no nitranga ny fitsaboana (Schulz et al. 2010) ary farany ho an'ny fiaraha-monina fikarohana (Mayo-Wilson et al. 2013) . Ny mifandray napetraka ny torolalana efa novolavolaina ny mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Journal of fanandramana siansa politika (Gerber et al. 2014) (jereo koa Mutz and Pemantle (2015) sy Gerber et al. (2015) ). Farany, tatitra toromarika novolavolaina tamin'ny psikolojia (Group 2008) , ary jereo koa ny Simmons, Nelson, and Simonsohn (2011) .
Raha mamorona ny fanadihadiana tokony handinika drafitra mialoha izany, satria mialoha ny fisoratam-fisoratana anarana dia hampitombo ny toky izay olon-kafa manana ao amin'ny valiny. Ankoatra izany, raha miara-miasa amin'ny mpiara-miasa, dia mametra ny mpiara-miasa ny fahafahana hanova ny fandalinana rehefa nahita ny vokatra. Pre-fisoratana anarana dia lasa hatrany iraisana amin'ny psikolojia (Nosek and Lakens 2014) , ara-politika ny siansa (Humphreys, Sierra, and Windt 2013; Monogan 2013; Anderson 2013; Gelman 2013; Laitin 2013) , sy ny toe-karena (Olken 2015) .
Raha namorona ny mialoha fanadihadiana drafitra dia tokony ho fantatrao fa ny sasany mpikaroka ihany koa ny mampiasa ny fihemoran'ny sy mifandray fomba hanatsarana ny fametrahana mazava tsara ny Tombanana fitsaboana vokany, ary misy ny sasany ny adihevitra momba izany fomba: Freedman (2008) , Lin (2013) , ary Berk et al. (2013) ; jereo Bloniarz et al. (2016) Raha mila fanazavana fanampiny.
Design torohevitra manokana ho an-tserasera ihany koa saha fanandramana aseho ao Konstan and Chen (2007) sy Chen and Konstan (2015) .
Mamorona aotra miova vidiny tahirin-kevitra (Fizarana 4.6.1)
Bebe kokoa momba ny MusicLab fanandramana, jereo ny Salganik, Dodds, and Watts (2006) , Salganik and Watts (2008) , Salganik and Watts (2009b) , Salganik and Watts (2009a) , ary Salganik (2007) . Bebe kokoa ny mpandresy-handray-tsena rehetra, jereo Frank and Cook (1996) . Bebe kokoa momba untangling vintana sy ny fahaiza-manao amin'ny ankapobeny, jereo ny Mauboussin (2012) , Watts (2012) , sy Frank (2016) .
Misy fomba iray hafa ny fanafoanana mpandray anjara vola izay mpikaroka dia tokony hampiasa-pitandremana: miaramila. Ao amin'ny saha anaty aterineto maro fanandramana mpandray anjara dia ankapobeny Voantso ho fanandramana ary tsy onitra. Ohatra izany dia ahitana fomba Restivo sy van de Rijt ny (2012) fanandramana eo amin'ny valisoa in Wikipedia Bond sy ny mpiara-miasa sy ny (2012) andrana amin'ny mandrisika ny olona hifidy. Ireo fanandramana dia tsy tena manan-zero ny miova vidiny, dia manana aotra miova vola ny mpikaroka. Na dia ny vola lany ny maro ny andrana ireny dia tena kely ny mpandray anjara tsirairay, kely vola lany dia nametraka goavana maro ny mpandray anjara no mahay manampy ny faingana. Mpikaroka nihazakazaka fanandramana matetika amin'ny aterineto goavana manamarina ny maha zava-dehibe ny kely Tombanana fitsaboana vokatry amin'ny filazana fa ireo vokany kely dia mety ho lasa zava-dehibe rehefa ampiharina amin 'ny olona maro. Ny tena fomba fisainany ihany mihatra amin'ny vola lany izay mpikaroka mitaky ny mpandray anjara. Raha ny fanandramana mahatonga ny olona iray tapitrisa mba handany minitra iray, ny fanandramana dia tsy tena mampidi-doza ho olona manokana, fa amin'ny aggregate efa lany efa ho roa taona ny fotoana.
Iray hafa namorona fomba fandoavam-bola fandaniana miovaova aotra ny mpandray anjara dia ny mampiasa ny loteria, ny fomba izay ihany koa no ampiasaina ao amin'ny fanadihadiana fikarohana (Halpern et al. 2011) . Farany, bebe kokoa ny fampianarana mahafinaritra mpampiasa-traikefa mahita Toomim et al. (2011) .
Manolo, sy hanadiovana ary Ahena (Fizarana 4.6.2)
Ireto ny famaritana am-boalohany ny telo R, avy any Russell and Burch (1959) :
R ny telo izay soso-kevitra tsy handresentsika ny etika fitsipika voalaza ao amin'ny Toko 6. kosa, izy ireo dia namelabelatra kokoa dika iray amin'ireo fitsipika-beneficence-manokana noho ny toe-javatra ny olombelona fanandramana.
Rehefa eo amin'ny areti-mifindra-pihetseham-po, misy telo tsy etika olana foana ao an-tsaina rehefa fandikana izany fanandramana. Voalohany, dia tsy mazava ny fomba ny tena tsipiriany ny fanandramana mifandray amin'ny ara-filazana; amin'ny teny hafa, dia misy fanontaniana momba ny fanamboarana kery. Tsy mazava tsara fa ny tsara sy ny ratsy teny fanisana dia tena tsara maneho ny fihetseham-po toe-mpandray anjara, satria 1) tsy mazava tsara fa ny teny izay olona mandefa dia tsara famantarana ny fihetseham-po sy ny 2) dia tsy mazava tsara fa ny fihetseham-po manokana fanadihadiana teknika fa nampiasa ny mpikaroka dia afaka reliably infer fihetseham-po (Beasley and Mason 2015; Panger 2016) . Amin'ny teny hafa, dia mety ho ratsy refin'ny mitongilana famantarana. Faharoa, ny famolavolana sy ny fandalinana ny andrana dia milaza amintsika na inona na inona momba izay tena fiantraikany (izany hoe, tsy misy fanadihadiana ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry) ary inona no mety ho ny mekanisma. Amin'ity tranga ity, ny mpikaroka maro nanana ny vaovao momba ny mpandray anjara, fa indrindra ireo entina ho gadget ao amin'ny fanadihadiana. Fahatelo, ny vokatry habe amin'ny fanandramana ity dia tena kely; ny maha samy hafa ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny toe-piainana no tokony ho 1 ao anatin'ny 1000 teny. Ao ny taratasy, Kramer sy mpiara-miasa aminy hanao ny raharaha fa ny vokatry ny habeny dia zava-dehibe io, satria an-jatony tapitrisa ny olona mahazo ny News Fahano isan'andro. Amin'ny teny hafa, dia milaza fa na dia izay kely vokany ho an'ny olona tsirairay izy ireo lehibe amin'ny aggregate. Na dia ireo ny hanaiky izany hevitra, dia mbola tsy mazava, raha misy fiantraikany ny habeny ity dia zava-dehibe kokoa momba ny fanontaniana ankapobeny mikasika ny fihetseham-po ara-tsiansa areti-mifindra. Bebe kokoa mikasika ilay toe-javatra izay dia zava-dehibe vokatra kely mahita Prentice and Miller (1992) .
Eo amin'ny voalohany R (Replacement), mampitaha ny Fihetseham-po areti-mifindra andrana (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) sy ny fihetseham-po areti-mifindra voajanahary fanandramana (Coviello et al. 2014) manome ny sasany ankapobeny lesona momba ny varotra-offs tafiditra amin'ny nifindra avy fanandramana ny fanandramana ara-nofo (sy ny fomba hafa toy ny mifanandrify amin'io fikasana manakaiky fanandramana in-andrana tsy tahirin-kevitra, jereo Chapter 2). Ankoatra ny amin'ny etika soa, ara amin'ny fanandramana ny tsy fianarana fanandramana mpikaroka ihany koa dia manome fahafahana hianatra fitsaboana fa izy ireo dia tsy afaka miisa logistically. Etika sy ara-pitaovana ireo tombontsoa avy amin'ny vola, na izany aza. Voajanahary amin'ny fanandramana ny mpikaroka no tsy mifehy ny zavatra toy ny fandraisana ny mpandray anjara, randomization, sy ny toetry ny fitsaboana. , Ohatra, iray fetra ny rotsakorana toy ny fitsaboana dia fa sady mampitombo positivity ary mihena negativity. Ao amin'ny andrana fianarana, na izany aza, Kramer sy ny mpiara-miasa dia afaka hanitsy positivity sy negativity tsy miankina.
Ny fomba manokana nampiasain'i Coviello et al. (2014) dia namelabelatra tao koa Coviello, Fowler, and Franceschetti (2014) . Ho fampidirana ny fitaovana hiovaova hahita Angrist and Pischke (2009) (tsy ara-dalàna) na Angrist, Imbens, and Rubin (1996) (more formal). Fa ny resy lahatra fanombanana ny fitaovana hiovaova mahita Deaton (2010) , ary ny fampidirana ny fitaovana malemy hiovaova amin'ny fitaovana (orana dia malemy fitaovana), jereo ny Murray (2006) .
Amin'ny ankapobeny, ny tsara voajanahary fanolorana fanandramana no Dunning (2012) , ary Rosenbaum (2002) , Rosenbaum (2009) , sy Shadish, Cook, and Campbell (2001) manolotra hevitra tsara momba ny estimating causal vokatry tsy misy fanandramana.
Eo amin'ny faharoa R (fanatsarana), misy ny siansa sy ny varotra ara-pitaovana-offs, rehefa manao ny fanovana ny famolavolana ny areti-mifindra avy amin'ny fanakanana-pihetseham-po lahatsoratra boosting lahatsoratra. , Ohatra, dia mety ho ny raharaha fa ny ara-teknika fampiharana ny News Feed mahatonga dia betsaka mora kokoa ny manao fanandramana amin'ny fanakànana lahatsoratra, fa tsy ny fanandramana amin'ny boosting lahatsoratra (mariho fa fanandramana amin'ny fanakànana Lahatsoratra azo ampiharina araka ny sosona ao amin'ny tampon'ny News Feed rafitra tsy misy fa ilaina ny fanovana ny rafitra fototra). Mpahay siansa, na izany aza, ny teoria miresaka ny fanandramana tsy tsara endrika iray manoro hevitra ny hafa.
Indrisy anefa, Izaho tsy mba fantany mialoha Mitana fikarohana momba ny havana mendrika ny fanakànana sy boosting votoaty ao amin'ny News Feed. Koa, tsy nahita loatra fikarohana momba ny fanadiovana tante- raka fitsaboana mba hahatonga azy ireo tsy dia mampidi-doza; iray miavaka no Jones and Feamster (2015) , izay mihevitra ny raharaha ny fandrefesana ny Internet sivana (ny foto-kevitra no miresaka tao amin'ny Toko faha 6 ao amin'ny fifandraisana amin'ny encore fianarana (Burnett and Feamster 2015; Narayanan and Zevenbergen 2015) ).
Eo amin'ny fahatelo R (Fampihenana), tsara fampidirana ny fahefana nentim-paharazana famakafakana dia Cohen (1988) . Pre-covariates fitsaboana azo tafiditra ao amin'ny famolavolana sy ny fandinihana sehatra sehatra ny andrana; Toko faha-4 ny Gerber and Green (2012) dia manome ny tsara fampidirana na fomba fijery, sy Casella (2008) manome kokoa ao amin'ny lalina fitsaboana. Teknika izay mampiasa io mialoha ny fitsaboana vaovao ao amin'ny randomization dia matetika antsoina hoe voasakana fanandramana na teti-dratsy, na stratified fanandramana teti-dratsy (ny voambolana tsy ampiasaina foana manerana fiaraha-monina); teknika ireo dia tena mifandray amin'ny stratified santionany teknika noresahina tao amin'ny Toko 3. Jereo Higgins, Sävje, and Sekhon (2016) bebe kokoa amin'ny fampiasana ireo teti-dratsy ao amin'ny fanandramana goavana. Mialoha fitsaboana covariates koa ho tafiditra ao amin'ny sehatra fanadihadiana. McKenzie (2012) mandalina ny fahasamihafana-in-tsy fitovian fomba namakafaka an-tsaha fanandramana in-tsipiriany kokoa. Jereo ny Carneiro, Lee, and Wilhelm (2016) bebe kokoa momba ny varotra-offs eo amin'ny fomba samy hafa mba hampitombo ny fametrahana mazava tsara ao amin'ny vinavina ny fitsaboana vokatry. Farany, rehefa manapa-kevitra na tsia ny miezaka mba ahitana mialoha ny fitsaboana covariates amin'ny famolavolana na fandalinana sehatra (na izy roa), dia misy lafin-javatra vitsivitsy mba handinika. Ao amin'ny toerana izay te-hampiseho ny mpikaroka fa izy ireo dia tsy "mpanjono" (Humphreys, Sierra, and Windt 2013) , mampiasa mialoha fitsaboana covariates amin'ny endrika sehatra mety ho mahasoa (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) . Amin'ny toe-javatra izay tonga mpandray anjara sequentially, indrindra fa amin'ny aterineto saha fanandramana, mampiasa mialoha ny fitsaboana vaovao teo amin'ny famolavolana sehatra Mety ho sarotra logistically, jereo ohatra Xie and Aurisset (2016) .
Ilaina ny nampiany kely ny zavatra manindry mandry momba ny antony fahasamihafana-in-fahasamihafana mety ho betsaka kokoa noho ny hafa-in-dia midika hoe. Maro ny vokatra an-tserasera no tena avo hampifandrafy (jereo ohatra, Lewis and Rao (2015) sy ny Lamb et al. (2015) ) ary somary mafy orina rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ity tranga ity, ny fanovana dia hanana betsaka isa kely hampifandrafy, mitombo ny herin 'ny antontan'isa fitsapana. Ny antony iray nanatona izany dia tsy ampiasaina matetika kokoa dia hoe talohan'ny ny nomerika mandrakizay dia tsy mahazatra ny manana vokatra mialoha-fitsaboana. Ny fomba mivaingana kokoa ny mieritreritra momba izany dia ny sary an-tsaina ny fanandramana mba handrefesana ny fanatanjahan-tena raha mba misy manokana fahazarana mahatonga levitra. Raha manao ny fahasamihafana-in-dia midika hoe fomba fijery, ny tombana dia hanana variability izay azo avy amin'ny ny variability amin'ny vato any amin'ny mponina. Raha manao ny fahasamihafana-in-samy hafa fomba, na izany aza, fa fiovaovana voajanahary nitranga in lanja vokany dia nifindra ka afaka mora kokoa ny mamantatra ny fahasamihafana vokatry ny fitsaboana.
Fomba manan-danja iray mba hampihenana ny isan'ny mpandray anjara ao amin'ny andrana dia ny hitarika ny fahefana famakafakana, izay Kramer sy ny mpiara-miasa afaka nanao miorina amin'ny vokatry habe notandremako hatry ny voajanahary fanandramana amin'ny Coviello et al. (2014) na ny teo aloha tsy andrana fikarohana avy Kramer (2012) (Raha ny marina ireo asa atao any amin'ny faran'ny toko ity). Mariho fa mampiasa ny fahefana fandalinana dia somary hafa noho ny mahazatra. Ao amin'ny Analog taona, ny mpikaroka amin'ny ankapobeny no fahefana fanadihadiana mba hahazoana antoka fa ny fianarana dia tsy kely loatra (izany hoe, eo ambanin'ny-Powered). Ankehitriny, na izany aza, dia tokony hanao fahefana mpikaroka fanadihadiana mba hahazoana antoka fa ny fianarana dia tsy lehibe loatra (izany hoe, ny-Powered).
Farany, dia nihevitra manampy ny fahefatra R: Repurpose. Izany hoe, raha mpikaroka mahita ny tenany amin'ny fanandramana bebe kokoa noho izy ireo angon-drakitra mila miresaka ny tany am-boalohany fikarohana fanontaniana, dia tokony repurpose ny angon-drakitra mba hanontany vaovao fanontaniana. Ohatra, sary an-tsaina sy ny mpiara-miasa aminy fa Kramer efa nampiasa ny fahasamihafana-in-fahasamihafana estimator ka nahita ny tenany amin'ny angon-drakitra kokoa noho ny ilaina mba hiatrehana ny fikarohana fanontaniana. Tsy tsy mampiasa ny angon-drakitra araka izay fara heriko, dia afaka nianatra ny haben'ny ny vokatry ho toy ny asa ny fitsaboana fihetseham-po mialoha fanehoan-kevitra. Toy Schultz et al. (2007) nahita fa ny vokatry ny fitsaboana dia hafa noho ny fahazavana sy ny mavesatra mpampiasa, angamba ny vokatry ny News Feed dia hafa ho an'ny olona izay efa niandry ny mandefa faly (na malahelo) hafatra. Repurposing mety hitarika ho "mpanjono" (Humphreys, Sierra, and Windt 2013) ary "p-fanapahana" (Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) , fa izy ireto no ankapobeny addressable amin'ny fitambaran'ny marina tatitra (Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) , mialoha ny fisoratana anarana (Humphreys, Sierra, and Windt 2013) , ary ny milina fomba fianarana izay miezaka mba tsy ny-miendrika.